Dagaalka Argagixisada maahee, ma taqaan caddow kale oo Muqdisho leedahay, dagaalna lagula jiro..? – Gobolada News Agency
Dagaalka Argagixisada maahee, ma taqaan caddow kale oo Muqdisho leedahay, dagaalna lagula jiro..?
06/12/2017 Warqaad Wararka
Tallaabada ay qaaday Dowladda Soomaaliya oo garab ka heleyso Beesha Caalamka waxaa looga hortagi karaa Musuqmaasuqa, iyadoo ay horey u jireen dhibaatooyin kale tani waxay noqoneysaa tallaabo cusub oo wax looga qabanayo dadka awoodda dowladda u isticmaalayo sida aan sharci aheyn gaar ahaan Saraakiisha Ciidamada Dowladda.
Sanado badan way hirgeli weysay in wax laga qabto dhaqanka Musuqmaasuqa ku saleysan ee ka dhex jiro Saraakiisha Ciidamada dowladda tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladda Dhexe ee uu hoggaamin jiray Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1991 markaas oo uu dalka Soomaaliya galay dagaalo sokeeyo oo socday muddo 20 sano ah.
Musuqmaasuqa iyo Laaluushka wuxuu Soomaaliya ka noqday wax caadi ah gaar ahaan qeybta saraakiisha Amniga qaabilsan, taas waxay sababtay inay Bulshada aqbalaan Musuq maasuqa joogtada ah ee dusha ka saaran waxaana sabab u ah Sharci darada wadanka ka jirto iyo inuusan jirin nidaam sax ah oo lagula dagaalamo Musuq maasuqa.
Dowladda hadda ka jirto Soomaaliya waxay ahmiyad gaar ah siisay sidii looga hortagi lahaa Masuqmaasuqaas iyadoo aan la iska indha tireyn dagaalka lagula jiro Ururka Xiriirka la leh Al-Qaacidda ee Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya culeys ku hayo isla markaasna mar kasta ka mashaquulinayo in si dhab ah looga hortago Musuq- maasuqa.
“Ahmiyadeena koowaad waa la dagaalanka Musuq maasuq, waxaana hadda diyaarsan qorsho dhameystiran oo looga hortagayo” ayuu yiri Thabit Cabdi.
“Qorshahaan cusub wax badan ayaa nagu caawin doonaa, balse waxaa muhiim ah in weyn looga taxadaro arrintaan, iyadoo laga fogaanayo in sarkaal aan dambi laheyn dusha laga saaro maadaama uu jiro xilfaatan gudaha ah oo ka dhaxeeyo Saraakiisha Ciidamada” ayuu yiri Mohamud Abdullahi oo ah korneyl howlgab ah oo ka tirsanaa Ciidamada Dowladda.
Waxaa turjumay: Cabaas Cali Xasan (Cabaas Xaliye)
The post Dagaalka Argagixisada maahee, ma taqaan caddow kale oo Muqdisho leedahay, dagaalna lagula jiro..? appeared first on Warqaad.com.
Previous Post:Markab moos wada oo laga helay maandooriye badan oo cocaine ah
Next Post:Guddoomiye Taabid oo Muqdisho u Dalbaday Ciidamo Madax Banaan